आज एकैदिन ९,३०५ नयाँ संक्रमित, १६८ जनाको मृत्यु Canada Nepal
आज एकैदिन ९,३०५ नयाँ संक्रमित, १६८ जनाको मृत्यु
गोरखापत्र अनलाइन बैशाख २९ २०७८
काठमाडौँ। नेपालमा कोरोनाभाइरसका नौ हजार २३८ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा २० हजार ३६२ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा नौ हजार २३८ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा ४२४ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गरिएकोमा ६७ जनामा पोजेटिभ पाइएको बताए । पछिल्लो चौबीस घण्टामा थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरसका कुल सङ्क्रमितको संख्या चार लाख २२ हजार ३४९ पुगेको छ ।
नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या पहिलो पटक एक लाखभन्दामाथि पुगेको छ । प्रवक्ता डा. गौतमले हाल एक लाख एक लाख एक हजार ६३४ जनामा भाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय रहेको बताए ।
सङ्क्रमितको संख्या दैनिक वृद्धि हुँदै जाँदा र निको हुने संख्या कम हुँदा निको हुने दर ७४.९ प्रतिशत पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार हाल एक हजार २४१ सङ्क्रमित हाल सघन उपचार कक्ष(आईसीयू)मा रहेका छन् । जसमध्ये २८५ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन जिल्लामा तीन हजार ९२४ सङ्क्रमित थपिएको जनाएको छ । पछिल्लो चौबीस घण्टामा काठमाडौंमा तीन हजार २५०, ललितपुरमा ललितपुरमा ४४८ र भक्तपुरमा २२६ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् ।
बैशाख २९, २०७८ बुधवार १६:५४:२९ बजे : प्रकाशित
# नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमण
# नेपालमा कोरोनाभाइरस
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन थपिए ५ सय ४५ जना कोराना संक्रमित, कहाँका कति ?
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गइरहेको छ । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ५ सय ४५ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप कोरोना संक्रमित हुनेमा काठमाडौंका ४५५ जना, ललितपुरका ७४ जना र भक्तपुरका १६ जना रहेका छन् ।
यस्तै मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कूल संक्रमितको संख्या पिसीआरतर्फ ६ लाख १२ हजार २ सय २ र एन्टीजिनतर्फ २२ हजार ४ सय ३ पुगेको छ । यस्तै निको हुने ८८.३ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार १८७ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ५ लाख ४० हजार ४३९ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ४१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ हजार ५०६ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आषाढ १, २०७८ मंगलवार १८:०८:२३ बजे : प्रकाशित
कोरोनापछि बालबालिकामा देखिएको समस्याबारे जान्नैपर्ने यी ५ कुरा
विष्णु पोखरेल, बीबीसी न्यूज नेपाली । नेपालका विभिन्न अस्पतालहरूमा मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन एमआईएस-सी भएर अस्पताल ल्याइने बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्न थालेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।
कोभिडपश्चात् बालबालिकामा देखिने गम्भीर स्वास्थ्य समस्या एमआईएस-सीका कारण उपचारका क्रममा "केहीको ज्यान समेत गइसकेको" चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा कोभिडबाट बालबालिकालाई बचाउन उपयुक्त ध्यान नपुग्दा यो समस्या देखा पर्न थालेको हो।
एमआईएस-सीको उपचार तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने र अस्पताल ल्याउन ढिलो भएमा अवस्था जटिल बन्ने भएकाले समयमै सचेत बन्न चिकित्सकहरूले अभिभावकलाई सुझाव दिएका छन्।
बीबीसीले कुराकानी गरेका केही बालरोग विशेषज्ञका अनुसार एमआईएस-सीबारे थाहा पाउनै पर्ने पाँच मुख्य कुराहरू यसप्रकार छन्:
१. एमआईएस-सी कहिले हुन्छ?
कोभिड नभएका बालबालिकामा एमआईएस-सी नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोनाभाइरस परीक्षणबाट कोभिड पुष्टि नभएका बालबालिकामा पनि यो समस्या देखियो भने उसलाई कोभिड थियो कि थिएन भनेर पहिले पुष्टि गर्ने गरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ।
कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. सुमित अग्रवाल भन्छन्, "शरीरको विभिन्न अङ्गमा असर देखा परेर आउने बच्चाहरूको कोरोनाभाइरससँग कुनै न कुनै सम्बन्ध हुन्छ।"
"कुनै बेलामा उसलाई भएको वा परिवारका सदस्यलाई भएको हुनसक्छ। त्यसको लिङ्क स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यस्ता बच्चाहरूलाई हामी एमआईएस-सी भएको भनेर भन्छौँ।"
उनका अनुसार कोभिड भएको एकदेखि तीन महिनाबीच एमआईएस-सी हुनसक्ने र केही न्यून सङ्ख्यामा कोभिड भएकै बेला पनि देखिएको छ।
ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. रुक्मा आचार्य कोभिड भएको दुईदेखि चार साताभित्र एमआईएस-सी देखिने बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, "धेरै जनाले 'पोहोरको लहरमा मेरो बच्चालाई कोरोनाभाइरस भएको थियो अहिले ज्वरो आएको छ। यो एमआईएस-सी हो कि होइन' भनेर सोध्नुहुन्छ। पोहोर (कोरोनाभाइरस) भएर अहिले चाहिँ हुँदैन।"
नेपाल पेडियाट्रीक सोसाइटीका अध्यक्ष वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. गणेशकुमार राई पनि कोभिड भएको दुईदेखि चार वा छ हप्ताभित्र यो समस्या देखा पर्ने बताउँछन्।
उनले भने, "त्यस बेला (एमआईएस-सी भएका बेला) एन्टिजन वा पीसीआर परीक्षण गर्दा प्राय: नेगेटिभ आउँछ तर एन्टीबडी चाहिँ देखिन्छ।"
२. लक्षण के-के हुन्?
एमआईएस-सी भएका बालबालिकाका शरीरका विभिन्न प्रणाली र अङ्गहरूमा एकै पटक असर गर्ने हुँदा विभिन्न खाले लक्षणहरू देखा पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
बालबालिकामा प्राय: उच्च ज्वरो आउने गरेको पाइएको डा. आचार्य बताउँछिन्। उनले भनिन्, "ज्वरो एकदमै हाई ग्रेडको अर्थात् धेरै तापक्रमको देखिन्छ र दुईदेखि चार दिनसम्म पनि धेरै ज्वरो आउने हुन्छ।"
त्यसबाहेक पेट दुख्ने, पखाला र बान्ता हुने एवम् शरीरमा डाबर देखिने पनि हुने गरेको उनले बताइन्। आचार्यले भनिन्, "महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने डाबरहरू आउँदा चिलाउँदैन र त्यो अनुहारभन्दा पनि जीउमा र हातगोडामा देखिन्छ। कसैकसैमा ओठ सुन्निने र जिब्रो सुन्निने पनि पाइएको छ।"
"एमआईएस-सीले गाल्यो र साह्रो भयो भने सास फेर्न गाह्रो हुने र बच्चाहरूले पिसाब कम फेर्ने जस्ता समस्या पनि देखिन्छ।"
३. कारण के हो?
कोरोनाभाइरससँग लड्नका लागि बालबालिकाको शरीरले गर्ने प्रतिक्रियाका कारण एमआईएस-सी हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। डा. राई भाइरस वा कीटाणुभन्दा पनि त्यसप्रतिको प्रतिक्रियाले एमआईएस-सी हुने गरेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "कीटाणु वा भाइरसप्रति हाम्रो शरीरले तीन खाले प्रतिक्रिया दिन्छ- एउटा साधारण प्रतिक्रिया, अर्को प्रतिक्रिया नदिने र अर्को एकदमै ज्यादा प्रतिक्रिया दिने।"
"प्रतिक्रिया नदिने पनि नराम्रो र ज्यादै प्रतिक्रिया पनि नराम्रो। साधारण प्रतिक्रिया हुनुपर्ने हो तर हाइपर अर्थात् ज्यादै प्रतिक्रिया दिएर एमआईएस-सीको अवस्था आउँछ।"
कोभिड निको भएपछि प्रतिक्रिया बिस्तारै कम हुनुपर्नेमा प्रतिरक्षा प्रणालीले शरीरभरिका अङ्गलाई गलत सूचना दिएर बढी सक्रिय बनाउँदा एमआईएस-सीको अवस्था आउने उनी बताउँछन्।
त्यसै कारणले यो कोभिड लाग्ने बित्तिकै नभएर पछि भएको राईको भनाइ छ। विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा एमआईएस-सी कोभिड भएका बालबालिकामध्ये प्रति दुई हजारमा करिब तीन जनालाई यस्तो हुने देखिएको उनले जानकारी दिए।
४. औषधोपचार कति सहज र सुलभ?
एमआईएस-सीका बिरामीको अवस्था पनि कोभिडका बिरामीको अवस्थाजस्तै फरक-फरक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। उनीहरूका भनाइमा कोभिडका बिरामी सामान्य, मध्यम र गम्भीर खालका भएजस्तै एमआईएस-सीका बिरामी पनि सामान्य, मध्यम र गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्।
र, बिरामीको अवस्था हेरेर त्यसैअनुसार उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य बिरामीका हकमा उपचार खासै खर्चिलो नभए पनि गम्भीर बिरामीका लागि उपचार निकै खर्चिलो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
नेपाल पेडियाट्रीक सोसाइटीमा सदस्य डा. अग्रवाल भन्छन्, "हामीले विभिन्न निर्देशिका अनुसार उपचार गर्ने हो। नेपाल पेडियाट्रीक सोसाइटीले पनि निर्देशिका बनाएको छ, त्यसैको अधीनमा रहेर हामीले उपचार गर्ने हो।"
"उपचार गर्दा हामीले इन्ट्रभिनस इम्युनोग्लोबुलिन (आईभीआईजी) भन्ने औषधि दिन्छौँ। यो चाहिँ अलि महँगै पर्न जान्छ।"यो औषधि बालबालिकाको तौलका हिसाबले दुई ग्राम प्रतिकेजी दिनुपर्ने उनले बताए। एन्टिबडीबाट बन्ने भएकाले यो महँगो पर्न गएको अग्रवालको भनाइ छ।
डा. राईका अनुसार आईभीआईजी नेपालमा नबन्ने भएकाले महँगो पर्न गएको हो।उनले भने, "बच्चाको अवस्था गम्भीर भयो भने त्यसको मुख्य दबाई भनेको आईभीआईजी हो। यो नेपालमा बन्दैन, भारतबाट ल्याउनु पर्छ।"
"यदि २० केजीको बच्चा छ भने त्यसको मूल्य कम्तीमा एक/डेढ लाख रुपैयाँ पर्न सक्छ। ४० केजीको बच्चा छ भने दुई/तीन लाख लाग्न सक्छ।" "एमआईएस-सी विशेष गरेर सानो बच्चाभन्दा पनि पाँच/छ वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई लाग्ने भएकाले यो औषधि पनि धेरै लाग्छ।"
डा. आचार्य चाहिँ सबै बालबालिकालाई आईभीआईजी नै दिइहाल्नुपर्ने अवस्था नआउने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "सबैलाई आईसीयू नै राख्नुपर्ने, सबैलाई नै इम्युनोग्लोबुलिन चढाइहाल्नुपर्ने भन्ने हुँदैन।"
"इम्युनोग्लोबुलिन दिने अवस्था भनेको मुटुमै असर परिसकेको, अलिकति साह्रै भइसकेको छ भन्ने हो। ... समयमै उपचार पायो भने चाहिँ महँगो प्रविधि दिएर उपचार गरिहाल्नु पर्दैन।"
५. कस्तो अवस्थामा अस्पताल लाने?
चिकित्सकहरूका अनुसार एमआईएस-सीका लक्षणहरू देखिने बित्तिकै बालबालिकालाई अस्पताल लानु उपयुक्त हुन्छ। एमआईएस-सी नवजात शिशुदेखि १९ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीमा समेत पाइएकाले किशोरकिशोरीले आफैँले पनि यस्तो समस्या देखा पर्दा अस्पताल जा नसक्ने उनीहरूको सुझाव छ।
विशेषगरी ८ देखि १० वर्षका बालबालिकामा यस्तो समस्या धेरै देखापरेको डा.अग्रवालले बताए।उनका अनुसार कान्ति अस्पतालमा हालसम्म ४० जनाभन्दा बढी यस्ता बिरामी आएको र त्यसमध्ये केही बालबालिकाको निधन नै भएको छ।
त्यसैले उनी बालबालिकालाई १०० डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आएमा, आँखा रातो भएमा र जीउमा डाबर देखा परेमा तत्कालै अस्पताल आउन सुझाव दिन्छन्।त्यस्तै निरन्तर झाडापखाला लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा पनि अस्पताल जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
डा. आचार्यका भनाइमा कोभिड भएका बालबालिकाप्रति अझ बढी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।त्यस्तै एमआईएस-सी हुनबाट बच्नका लागि कोभिडबाट बच्ने उपायहरू अपनाउन पनि उनी सुझाव दिन्छिन्।समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
आषाढ २, २०७८ बुधवार १३:४४:३६ बजे : प्रकाशित
स्वास्थ्य विज्ञानमा अर्काे सफलता : कोरोनाबाट जीवन रक्षा गर्ने ‘अर्को उपचार पत्ता लाग्यो’
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)बाट जीवन रक्षा गर्ने नयाँ उपचार पत्ता लगाएको वैज्ञानिकहरुले दाबी गरेका छन् । महँगो मानिएको नयाँ उपचारमा एन्टीबडीलाई शरीरमा प्रवेश गराएर भाइरसलाई निर्मूल पार्ने काम हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
सस्तो औषधि डेक्सामेथासोनले कोभिडबाट हुन सक्ने मृत्युलाई कम गर्ने कुरा पत्ता लागेको एक वर्षपछि अध्ययनकर्ताहरूले अर्को सफलता हात पारेको चर्चा भइरहेको छ ।
नयाँ उपचारमा ३३ प्रतिशत बिरामीको जीवन रक्षा गर्ने देखिएको छ। नयाँ उपचार पहिल्यै एन्टीबडी नबनाएका बिरामीहरूलाई मात्रै दिन सकिने र यसको मूल्य एक लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख ५० हजारसम्म पर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
रेजेनोरोनले विकास गरेको यो मोनोक्लोनल एन्टीबडी उपचारले कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रणमा लिने र कोषलाई सङ्क्रमण गर्नबाट रोक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले दाबी गरेका छन् ।
बेलायतका १० हजार बिरामीमा परीक्षणमा मृत्युको जोखिम, अस्पताल रहनुपर्ने अवधि औसतमा चार दिनले कमि र भेन्टिलेटरको आवश्यकता नपर्ने देखिएको दाबी गरिएको छ ।
संयुक्त प्रमुख अनुसन्धानकर्ता सर मार्टिन ल्यान्ड्रेको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ, ‘दुई एन्टीबडीको यो स्वरूपलाई रगतमा पठाउँदा मृत्युको सम्भावना २० प्रतिशतले घटाउँछ। अहिले हामीले पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ यो एन्टीभाइरल उपचारले मृत्युको सम्भावना एक तिहाइ भएका बिरामीहरूलाई त्यस्तो जोखिम कम गर्छ।“
यो उपचार डेक्सामेथासोनसँगै दिइएको थियो। डेक्सामेथासोनले पनि सिकिस्त बिरामीहरूमा एक तिहाइसम्म मृत्युको जोखिम कम गर्छ।
निको भएका बिरामीको रगतबाट एन्टीबडी भएको प्लाज्मा निकालेर गरिने उपचार कोभिडको उपचारमा प्रभावकारी नभएको पाइएको अर्का प्रमुख अनुसन्धानकर्ता सर पिटर होर्बीले बताएका छन् ।
तर यो नयाँ परीक्षणमा प्रयोग गरिएको उपचारमा प्रयोगशालामा निर्मित दुई निश्चित एन्टीबडीहरू कोरोनाभाइरसलाई बाँध्न सक्षम भएको दाबी गरिएको छ ।
सर होर्बीको भनाइ उद्धृत बीबीसीले लेखेको छ, ‘गम्भीर खालको कोभिड रोगमा पनि भाइरसलाई लक्षित गरेर आफै एन्टीबडी बनाउन नसकेका बिरामीहरूको मृत्युदर घटाउन सकिने कुरा थाहा पाउनु राम्रो हो।’
आषाढ २, २०७८ बुधवार १५:५९:३३ बजे : प्रकाशित
३०८२ जनाले जिते कोरोनालाई, ५२ संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ८२८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुधबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङ कार्यक्रममा प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले कूल १३ हजार २२ परीक्षण गर्दा २ हजार ८२८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार ८ हजार ६८७ पीसीआर परीक्षणमा २ हजार १४ जनामा र ४ हजार ३३५ एन्टिजेन परीक्षणमा ८१४ जनाको कोरोना संक्रमण देखिएको हो । बुधबार अपरान्हसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ६२ हजार ११७ रहेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ३ हजार ८२ रहेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सोही अवधिमा ५२ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
आषाढ २, २०७८ बुधवार १७:१०:४० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन थपिए ४ सय ९९ जना कोराना संक्रमित, कहाँका कति ?
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बुधबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ४ सय ९९ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप कोरोना संक्रमित हुनेमा काठमाडौंका ३५४ जना, ललितपुरका ६६ जना र भक्तपुरका ७९ जना रहेका छन् ।
यस्तै मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा २८ सय २८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कूल संक्रमितको संख्या पिसीआरतर्फ ६ लाख १४ हजार २ सय १६ र एन्टीजिनतर्फ २३ हजार २ सय १७ पुगेको छ । यस्तै निको हुने ८८.५ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ८२ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ५ लाख ४३ हजार ५२१ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ हजार ५५८ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आषाढ २, २०७८ बुधवार १८:०५:३६ बजे : प्रकाशित